ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) - 2Game
Adventure MODE နဲ့အော့ဖ်လိုင်း Race ပျော်ရွှင်စရာနှင့် Mission ရာပေါင်းများစွာ
လက်ရှိအချိန် multiplayer Race
multiplayer ရာသီမှာတော့ multiplayer အဖြစ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူအပြေးပြိုင်ပွဲ။
4 ကစားသူများနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလူမျိုး MODE
အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Mode ကိုခုနှစ်တွင်,4ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအရပ်မှသင်၏အမည်ကိုရေးပါ။
အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောရူပဗေဒနှင့်အင်ဂျင်အသံရှိခြင်းကြောင့်မော်တော်ယာဉ်များသောင်းချီသင်တစ်ဦးသည်အလွန်လက်တွေ့ခြင်း simulation တွေ့ကြုံခံစားစေမည်။
သင့် CHARACTER နှင့်ယာဉ်များကိုစိတ်ကြိုက်
သငျသညျအငျတာနကျရှိ dont အကယ်. ★, မစ်ရှင်ရှိပါတယ်။
တစ်ခုကအော့ဖ်လိုင်းနှင့်သင့် device အတွက်ဖြစ်သင့်ကြောင်းအွန်လိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်း★။
Android အတွက် ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!